La Yaabka Aduunka:Maxbuuskii ugu da’da weynaa oo xabsi laga siidaayey (Sawiro) – SBC
La Yaabka Aduunka:Maxbuuskii ugu da’da weynaa oo xabsi laga siidaayey (Sawiro)
Posted by editor on Juun 25, 2011 Comments
Brij Bihari Pandey oo 108 sano jir ah oo loo aqoonsadey maxbuuskii ugu da’da weynaa ayaa laga siidaayey xabsi uu ku jiray mudo 14 sano ah.
Pandey ayaa isagoo 84 sano jira wuxuu geystey dil waxaana la sheegay in isaga & dad kale oo tiradoodu gaarayso 14 qof oo u badnaa ilmo adeersadiis & xubno kale oo ka mid ahaa qoyskiisa ayaa weerar ay geysteen waxay ku dileen afar qof ka dib muran ka dhacay goob dadka Hinduuga wax ku caabudaan sanadkii 1987-dii.
“Aad ayey u adkaanaysaa in aynu daryeelno maxbuus da’diisu tahay 108 sano, waxaan qaadanay go’aan aan ku siidaynayo oo aan u gudbinay maxkamada wayna naga ogolaatey” sidaasi waxaa saxaafada u sheegay S.K. Sharma, oo ah maamulaha xabsiga Gorakhpur oo ku yaal magaalada Lucknow oo ah xarunta gobolka Uttar Pradesh ee waqooyiga wadanka Hindiya.
Sharma wuxuu intaasi ku darey in siideynta maxbuuskan oo wadanka Hindiya loo aqoonsadey taariikhda maxbuuskii ugu da’da weynaa ee xabsi la dhigo in ay aheyd mid ku saleysan arimo aadamtinimo.
Pandey ayaa markii la siidaayey isagoo garbaha la hayo wuxuu muujiyey in uu ku faraxsan yahay in xabsiga laga siidaayo, iyadoo tobanaan taageerayaashiisa ay marba dhinac u qaadayeen iyagoo ku faraxsan siideyntiisa.
Hadaladii uu sheegayey markii la soo daayey waxaa ka mid ahaa “ILAAH ayaa mahad leh, adinkuna waad mahadsantihiin”.
Juun 25, 2011 at 2:44 pm
waa qiso layaableh